Fanalam-baraka anaty facebook Voasambotra ilay nandrahona hanapariaka sarina mpivady mitanjaka
Lehilahy iray no voasambotry ny polisin'ny « division cybercriminalité » Anosy ny 7 janoary teo noho ny fanalam-baraka avy amin'ny alalan'ireny kaonty vorondolo na « compte fake » ireny.
kaonty vorondolo no nangataka ho naman'ilay vehivay tao anaty Facebook. Tsy fantany io ka tsy nekeny. Gaga anefa izy taorian'izay fa efa tafiditra tao anatin'ilay kaontiny izy ary azony ny sarin'izy mivady miboridana tao. Nandrahona ny hanaparitaka ireo sary miboridana ireo ity lehilahy ity raha tsy manome ny vola 500 000 ariary. Noho ny tahotra ny hiparitahan'ireo sary ireo sy ny fahafam-baraka ahazo azy dia nanome ny ampaham-bola ity vehivavy. Nametraka fitoriana avy hatrany tao amin'ny “cybercriminalité” ity farany ka nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny polisy. Nosamborina avy hatrany ilay tovolahy rehefa fantatra avokoa fa ilay lehilahy niangavy ho namana tamin’ny facebook no tao ambadik’ilay kaonty vorondolo. Tsy vao ela akory ny Polisy no nahatratra lehilahy iray hafa nanao kaonty vorondolo ary nanaparitaka sary miboridana vehivavy iray izay efa manambady tany amin’ny fianakavian’ilay vadiny sy ny rafozany rehefa tsy nety niaraka taminy ity farany. Efa hitan’ny Polisy ihany koa ny tao ambadik’ilay kaonty vorondolo ary efa nosamborina ka natolotra ny fitsarana.Maro ny tsy mahafehy ny teknolojia avo lentan’ny tambazotran-tserasera ka miditra amin’ny fiainan’olona manokana. Ao koa anefa ireo tsy malina ka mitahiry ny sary saro-pady anaty facebook ka ararotin’ireo jiolahin’ny teknolojia vaovao.